2012 July | MoeMaKa Burmese News & Media
ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၂ YPI (Yangon Press International ) ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ၅ ဦး ဋ္ဌာနပြောင်းရွှေ့ရန် သတင်းထွက်ပေါ် ဟူသည့် သတင်းဖေါ်ပြမှုများကြောင့် The Voice Weekly...
လူတယောက် ဘဝ တခုစီရတယ် … အဲဒီလို ရခဲတဲ့ လူ့ဘဝမှာ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း အခက်အခဲဟူသမျှ ခုခံရင်ဆိုင်တယ်။ သဘာဝတရားကြီးကိုလည်း တိုက်ပွဲဝင်ရတယ် စားဝတ်နေရေးကိုလည်း နေ့စဉ်ဖြေရှင်းရတယ် လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ တရားမှု၊ မတရားမှုတွေနဲ့လည်း (မတရားမှုတွေက...
ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၂ by Yangon Media Group ရန်ကုန်မီဒီယာဂရု(ပ်) သတင်းအဖွဲ့ ရိုက်ကွင်းတွင်မှတ်တမ်းတင်သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် – ခင်ဗျားတို့ CNA အနေနဲ့ကတော့ နာမည်ကြီးတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ CNAသတင်းဌာနကို လူကြည့်တော်တော်လဲများပါတယ်။ များသောအားဖြင့်ကြည့်ကြတာများပါတယ်။...
အကြောင်းမဲ့ ကျောင်းမဲ့ကြသူများ (Ashin Nanika)
အကြောင်းမဲ့ ကျောင်းမဲ့ကြသူများ အကြောင်း အရှင်ဥာဏိက၊ ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၂ မတွေးလျင်လည်း အရှင်း၊ တွေးမိပြန်လျင်လည်း မီးခုိုးမဆုံး မုိုးမဆုံး အဆုံးအစမဲ့ အတွေးနယ် ချဲ့တတ်တဲ့ ကုိုယ့်အကြောင်းကုို သိနေလုို့ မတွေးပဲနေလာခဲ့တာ တော်တော်ကြာပြီ။...
ပြည်ချစ်မောင်(သာယာဝတီ)။ ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၂ (နို့ဘိုးဒုက္ခသည်စခန်းကနေ ရေးတဲ့စာ) တလောကကြားလိုက်မိပါသေးတယ် “အိမ်ပြန်ခွင်”့ တဲ့ တကယ်တော့လဲ၊ ဘယ်တော့မှ ရောက်မလာတတ်တဲ့ ရွှေမိုးကိုမျှော်လင့် နေကြသူတွေလို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တစ်လျောက်ကဒုက္ခသည်တွေ ဟာလဲဖင်တကြွကြွနဲ့ အိမ်ပြန်ခွင့်တွေကိုစောင့်နေကြပါပြီ။ တကယ်တော့ တရားဥပဒေအထက်မှာ...
မြစ်ဆုံဆည်ကို ဂွမတိုက်နဲ့ … (Cartoon Saw Ngo)
ကာတွန်းစောငို – မြစ်ဆုံဆည်ကို ဂွမတိုက်နဲ့ … ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၂
မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၂ လာမည် စက်တင်ဘာလအတွင်း အင်န်အယ်ဒီပါတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရှေ့ခြမ်း ၀ါရှင်တန်ဒီစီနှင့် နယူးယောက်မြို့တော်များက လွှတ်တော်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ စီစဉ်ဖိတ်ကြားချက်အရ ဧည့်သည်တော်အဖြစ် လာရောက်ပြီး ဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်မှုများကို...
မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၂ ဇူလိုင် ၂၈ က နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိ မေတ္တာဓမ္မဝိဟာရကျောင်းတွင် နယ်သာလန်ရောက် မြန်မာမိသားစုများစုပေါင်း၍ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲကိုကျင်းပကြသည်။ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲသိုးဂျာမဏီနိုင်ငံ Frankfurt မြို့မှ ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ နှင့်ဆရာတော် ဦးသုမန တို့လည်းကြွရောက်တော်မူကြသည်။...
29th July – မိုးမခရေဒီယို
ဇူလိုင် ၂၉ ၊ ၂၀၁၂ – မုိုးမခရေဒီယို ဂန္ထ၀င် အဆိုရှင် သက် ၇၀ မာမာအေး ဂုဏ်ပြု မြန်မာသီချင်းဆိုရအောင် – ပန်တျာမောင်၊ မာမာအေး သတင်းတိုထွာ၊ သီချင်းပဒေသာ ယူအက်စ်အေပွဲစဉ်များနဲ့...
ကျော်နုိုင်၊ ဥက္ကလံ၊ ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၂ ရက်သတ္တပတ်ကြာ ကျင်းပတဲ့ ဥက္ကလံမြို့၊ ဓမ္မဧရိပ် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ကလေးများအတွက် နွေရာသီ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းဆင်းပွဲကို ယမန်နေ့က ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ ကျင်းပရာ ကလေးလူငယ် ဦးရေ...
နင်းပြားဝန်ထမ်း ပြည်သူများ၊ ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၂ ပေးစာ (၁) – ၀န်ကြီးဌာနတခုလုံး အမျိုးနဲ့ ခရိုနီတွေချည်းပဲ ကျနော်ဟာ လျှပ်စစ်(၁) ၀န်ကြီးဌါနက အရာထမ်းတဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဌါနက ၀န်ထမ်းရေးရာ...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၂ ၂၉. ၇. ၂ဝ၁၂ ရက်နေ့ နံနက် ၉းဝဝ နာရီအချိန်တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူမှ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊ အမှတ်...
မနေ့ကအကြောင်း ပြန်ပြီး ပြောကြဆိုကြတဲ့အခါ ကမာပုလဲ ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၂ မရောက်ရောက်အောင် ခြေလှမ်းများ လမ်းကလေး အတိုင်း ကတိစကား အတိုင်း ဘဝကို … အရှိ … အရှိအတိုင်း။ တိုက်ပွဲတွေဟာ...
တဆန်းသစ်ကို မျက်နှာတော်မူခန်း ကျော်ဟုန်း၊ ဇူလိုင် ၂၉ ၊ ၂၀၁၂ ထူးချင်ရင်တော့ ရူးမှဖြစ်မယ် ဂျွန်ချိန်ဘာလိန်ရဲ့ စိတ်ကူးကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြ။ ကိုခင်ဝမ်းရဲ့ ဒြပ်မဲ့ပန်းချီနဲ့ငါ ခဏခဏ စကားပြောဖြစ်တယ်။ ဆရာကြီး...
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးက တရားစီရင်ရေး … နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူ သိစေရန် မျက်မြင်တဦး (ကျုံပျော်) ဇူလိုင် ၂၉ ၊ ၂၀၁၂ ဧရာဝတိတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ မြို့နယ်တရားရုံးဍ် ဇူလိုင် ၂၅ ရက်နေ့...
ခေတ်ကိုလည်း ကိုယ်စားပြုတယ် အရပ်ဒေသမရွေး မှတ်ကျောက်တင်ခံတယ်။ စကားလုံးတွေက သိပ်သည်းကျစ်လျစ် အနက်အဓိပ္ပာယ်တွေက ရိုးရှင်း ကျယ်ပြန့် … ။ သင်က သူ့ကို တရွက်ခြင်း လှန်သွားစရာမလိုဘူး သူကသာ သင်တို့ကို တမျက်နှာချင်း လှန်သွားလိမ့်မယ်။...
ဇူလိုင် ၂၉ ၊ ၂၀၁၂
ရွှေည၀ါဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟ ဥက္ကလံ ဓမ္မဧရိပ်တွင် ပထမဦးဆုံးတရားပွဲ ကျင်းပမည် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဇူလုိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၂ အမေရိကန်ခရီးစဉ်၏ ပထမဦးဆုံး တရားပွဲအဖြစ် ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ ဥက္ကလံမြို့ ဓမ္မဧရိပ်ကျောင်းတိုက်တွင် ဇူလိုင် ၂၉ ၊...